China Electronic Weekly: Chinese Anti-Popular Agency က Door Tai Tiguya Motor Sponsored eStar. pro - Pandaily
China Electronic Weekly: Chinese Anti-Popular Agency က Door Tai Tiguya Motor Sponsored eStar. pro
Categories: Gaming ကိုPandaily ဇူလိုငျ 16, 2021 ဇူလိုငျ 16, 2021 မှာ Posted
ပွီးခဲ့တဲ့အပတျက တရုတျE-Sports လုပျငနျးမှာ အဓိကကတြဲ့ တရုတျဆနျ့ကငျြရေးလကျဝါးကွီးအုပျမှုကို အဆုံးသတျခဲ့ပွီး သညျအဂေငျြစီဟာ တရုတျရဲ့အကွီးဆုံးဂိမျးနှဈခုကို တိုကျရိုကျထုတျလှငျ့နတေဲ့ Tai Fish နဲ့ Tiguang တို့ပေါငျးစညျးခဲ့ပါတယျ။ သညျLive platform နှဈခုဟာ တရုတျစီးပှားရေးလုပျငနျးစုကွီးဖွဈတဲ့ Tencent Holdings နဲ့ ပေါငျးစညျးပွီး ဆကျလကျဆောငျရှကျမယျဆိုရငျ Tencent ရဲ့ ဈေးကှကျဝစေုရဲ့ ၇၀ ရာခိုငျနှုနျးကိုရရှိမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ တရုတျE-Sports လုပျငနျးမှာလညျး စပှနျဆာမရှိသလောကျနညျးပါးပွီး တရုတျနိုငျငံထုတျ New Energy ကား စပှနျဆာအပါအဝငျ အခွားပွညျတှငျးထုတျ Sports Fitness Company တဈခုကိုလညျး စပှနျဆာပေးထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
Wuhan ၏ Estar Game Course အမှတ် (ESV5) သည် ဆွီဒင်အခြေစိုက် E-Sports အဖွဲ့နှင့် ပေါင်းစည်းထားကြောင်း သိရပြီး Ninja Gives &
-E-Sports Production ကုမ္ပဏီ Imba TV နှင့် Tiguetooth; Private Cooperation Agreement လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း
-Hyperceနှင့် China Electronic Sports Organization B Stand Game (BLG) စပွန်ဆာသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း;
-Tencent TiMi Studio Group of the Wang Glory World Champions Championship ပွိုငျပှဲရဲ့ ဆုကွေးငှတှေေ ခှဲဝပေေးခဲ့ပါတယျ။
တရုတျအမြိုးသားဈေးကှကျကွီးကွပျရေးအာဏာပိုငျအဖှဲ့က လကျဝါးကွီးအုပျမှုတိုကျဖကျြရေးအတှကျ စုံစမျးစဈဆေးမှုတဈရပျကိုရပျဆိုငျးပွီး တိုကျပှဲဝငျ ကြားအံသှားငါးကောငျကိစ်စကိုပူး
ဇူလိုင် ၁၀ ရက်က တရုတ် အမျိုးသားဈေးကွက်ကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်အဖွဲ့ (SAMR) က ကြေညာပြီးနောက် တရုတ်သည် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် ပလက်ဖောင်းများကို လက်ဝါးကြီးအုပ်မှု ဆန့်ကျင်သည့် စစ်တမ်း၊ ငါးနှင့် ကျားသွားများ ပေါင်းစည်းမှုကို ရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်သည်။ Tencent ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ယခုပေါင်းစည်းမှုက ဈေးကွက်ဝေစု၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကို သိမ်းပိုက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရကြောင်း တရုတ်က Live Game နယ်ပယ်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ သညျဆုံးဖွတျခကျြတှကေို အသအေခြာ လိုကျနာဆောငျရှကျမယျ၊ အပွုသဘောဆောငျတဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျး အသီးသီးကိုလိုကျနာဆောငျရှကျမယျ၊ ဥပဒကေိုလိုကျနာဆောငျရှကျမယျ၊ ထိထိရောကျရောကျလူမှုရေးတာဝနျတှကေို ထမျးဆောငျမယျ” လို့ Tencent က ပွောပါတယျ။
ထို့အပွငျ ကြားသှားနှငျ့ ငါးပပေေါငျး ဘုတျအဖှဲ့ကို ဖကျြသိမျးခဲ့ပွီး ယငျးလြျောကွေးကို ခှငျ့ပွုမိနျ့ ပေးကာ ငှသေားကွေးအဖွဈ ပေါငျးစညျး ပေးခဲ့ကွောငျး၊ ယငျးလြျောကွေးကို မူလရှယျယာရှငျမြားက သိနျး ၂၀၀ ခနျ့ ပေးလြျောခဲ့ကွောငျး၊ ငါးပပေေါငျး သိနျး ၆၀၀၀ ခနျ့ ပေးလြျောခဲ့ကွောငျး ရှယျယာရှငျမြားက ပွောသညျ။
Tiger ငါးနဲ့ Tencent တို့ ပေါငျးစညျး ရိုကျနှကျမှုကနေ ရုနျးထှကျဖို့ အသံခြဲ့စကျနဲ့ B Station ရဲ့ လကျခကျြလို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ခုခံကာကှယျဖို့ အကှကျဆငျ လှုပျရှားနရေတာကလညျး အဓိက အခကျြပါပဲ။ တကယ်တော့ Tencent ဟာ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ တန်တဲ့ သဘောတူညီချက်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားပြီး သူ့ကိုယ်သူ Live Game Platform မှာ ပင်ဂွင်းငါးကောင်ကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
Topics: မွငျကှငျးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံး ဈေးကွက်စည်းမျဉ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tencent ရဲ့ ဗီဒီယိုဂိမ်း Streaming Tiguit, Duong ငါးမျိုးပေါင်းစပ်ထားတဲ့
ယခုနှစ် မေလတွင် Tiguo ငါးနှင့် Tiguang ကုမ္ပဏီနှစ်ခု၏ စုစုပေါင်းဝင်ငွေမှာ သန်း ၇၄၀ ရှိခဲ့သည်ဟု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပထမသုံးလပတ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို သုံးရက် ကြာ ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ကြေညာပြီး နောက် တရုတ်e-Sports ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ ImbaTV နှင့် သီးသန့်ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘော တူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ သည်။ ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် Dota2, CS: GO နှင့် PUBG တို့ ယှဉ်ပြိုင်သည့် e-Sports အကြောင်းအရာကို အားကောင်းစေမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ ImbaTV ၏ ပြိုင်ပွဲများကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကအာရုံစိုက်သည့် အထင်ကရ Valve E-Sports Product, Dota2နှင့် CS: GO တို့ ဖြစ်သည်။ ၎င်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူ ယူကရိန်းချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူ Starlader နှင့် ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သည့် Dota2Championship အမှတ်တံဆိပ် Starladder ImbaTV League (SL-i League) ဖြစ်သည်။
PUBG နှင့် ပတ်သက်၍ Third Party ပွဲစီစဉ်သူများက တရုတ်နိုင်ငံတွင် အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခွင့်ရသည့် ပြိုင်ပွဲများထက် ပထမတစ်ချက်က ပိုမိုပြဿနာများရှိလာနိုင်သောကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် Game of PC ဗားရှင်းကို အတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် Tiger ImbaTV နှင့် သီးသန့်ကုန်သွယ်ရာတွင်လည်း Tiger Tometooth အပေါ် ထားရှိသော သဘောထားများကို ထင်ဟပ်စေခဲ့ပြီး ယင်းအပိုင်းသည် မဟာမိတ်များအနေဖြင့် ပြိုင်ဘက်များကို ဆက်ဆံရန် ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ Tiguang Hero Alliance (LPL)၊ Hero Alliance for Development Alliance (LDL) နှငျ့ Game All Star Equipment Exclusive Media မူပိုငျခှငျ့ ငါးနှဈ သဘောတူညီခကျြ ရရှိထားသညျ။
Piribi Motor Sponsor KPL War Team eStar. Pro
ဇူလိုင် ၁၅ ရက်က တရုတ် ကားကုမ္ပဏီ Cabribi က ကြေညာခဲ့သည့် King King Professional League (KPL)အဖွဲ့သည် eStar. Pro ၏ စပွန်ဆာသဘောတူညီချက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ယင်းအဖွဲ့၏မဟာဗျူဟာကို မိတ်ဖက်အဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။
Pro သည် တရုတ်အီလက်ထရောနစ် Sports ကုမ္ပဏီ Estar Gaming Victory Dev-ive (ESV5) ၏ King Glory Department ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှဈတှငျ ဝူဟနျ၏ Estar Gaming သညျ Shenzhen အခွစေိုကျ Win Win နှငျ့ ပေါငျးစညျး တညျထောငျခဲ့ပွီး ဝူဟနျနှငျ့ ဖကျစပျ ESV5 ကို ထူထောငျခဲ့သညျ။ LPL သည် မည်သည့်ကုမ္ပဏီကမျှ LPL တွင်သာ အသင်းတစ်သင်းသာ ရှိပြီး၊ Estar Gaming ကို ၎င်း၏ LPL တွင် Franchise လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသောကြောင့် Guangzhou Neking Group နှင့် UP ဟု အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အောင်ပွဲခံရန် နံပါတ်ငါးနေရာကို LPL က သိမ်းထားသည်။
ကားစပွန်ဆာပေးတုန်းကတော့ Piumi က နံပါတ်ငါးနေရာမှာ အောင်ပွဲခံနေဆဲပါ။ King of the History, eStar. Pro က KPL ချန်ပီယံဆုပေါင်းများစွာကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် 2019 King World Champions Cup ကိုလည်း ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ယခုအခါ Piumbridi Motor သည် စွမ်းအင်သစ်များကို အဓိကထား ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ မကြာသေးမီက Vigumi Report ကုမ္ပဏီက ဇွန်လတွင် ကားအစီးရေ ၅၁၀၁၅ စီးရောင်းချခဲ့သည်။ ကားသဈတှထေဲက ၈၁.၁ ရာခိုငျနှုနျးဟာ စှမျးအငျဝနျကွီးဌာနကနေ ၁၈.၉ ရာခိုငျနှုနျးဟာ လောငျစာဆီကားတှဖွေဈတယျ။
ဇူလိုင် ၉ ရက်က ဆွီဒင်အီလက်ထရောနစ် အက်သလက်တီကိုအဖွဲ့ Sinja Ninja နဲ့ တရုတ်အီလက်ထရောနစ် Sports ကုမ္ပဏီ ESV5 တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်ခဲ့တာလို့ ရိုက်တာသတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သတငျးရငျးမွဈတဈခုက ရိုကျတာသတငျးဌာနကို ပွောကွားရာမှာ “၂၀၂၁ ခုနှဈမှာ ကုမ်ပဏီနှဈခုရဲ့ စုစုပေါငျးဝငျငှဟော ယှမျ သနျး ၄၀၀ (၆၂ ဒသမ ၄ သနျး) ကြျောလိမျ့မယျ” လို့ ဆိုပါတယျ။
ဇူလိုင် ၁၅ ရက်က အမေရိကန် အားကစားကြံ့ခိုင်ရေးကုမ္ပဏီ Hyprice က ကြေညာခဲ့သည့် LPL War Team B Stand Games (BLG) ၏ စပွန်ဆာသဘောတူညီချက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် တရုတ်အသင်း၏ နည်းစနစ်များကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရန် ဖြစ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ငှကွေေးအပေးအယူကိစ်စတှငျ သတျမှတျကာလနှငျ့ ညီမြှခွငျး မရှိ။
ဇူလိုင် ၁၄ ရက်က Tencent Temi Studio Group က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် စည်းမျဉ်းအရ ယခုနှစ်အတွက် Wang Glory World Champions Cup (KCC)၏ ပူးလ်ဆုကို ခွဲဝေရယူခဲ့သည်။ ယင်းပွဲတွင် ဆုကြေး စုစုပေါင်းမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း ၅၀ (၇၇၄ ဒသမ ၂၁ သန်း) ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ချန်ပီယံဆုမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း (၃၂၅ ဒသမ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်း) ရရှိကာ စုစုပေါင်းဆုငွေ၏ ၈ ဒသမ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်း (၁၂၄ ဒသမ ၈ သန်း) သာ ရရှိကာ ဒုတိယနေရာမှ စုစုပေါင်း ဆုငွေ၏ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။